Weriyayaashii ugu badnaa oo Boorsooyinkooda ka qaatay Tv-ga Al-Jaziira. (Waa maxay Sababtu).	| Salaan Media
Home Wararka Weriyayaashii ugu badnaa oo Boorsooyinkooda ka qaatay Tv-ga Al-Jaziira. (Waa maxay Sababtu).
Weriyayaashii ugu badnaa oo Boorsooyinkooda ka qaatay Tv-ga Al-Jaziira. (Waa maxay Sababtu).
Sida ay Qorayaan Wargeysyada Carabta kuwooda ugu afka dheer waxaa shaqadii Wariye nimo isaga huleelay ugu yaraan 22 Wariye oo ka howl geli jiray TV-ga Carabta ugu afka dheer sidoo kalena Caalamka saameyn weyn ku leh ee Al-Jazeera.
Sida uu wariyay Wargeyska Golf News wariyayaashan ayaa go’aansaday inay shaqada isaga tagaan kadib markii ay sheegeen in Al-Jazeera ay si cad uga been abuurtay arimaha ka taagan dalka Masar, iyagoo TV-ga ku eedeeyay in uu gacan weyn siinayo Kooxda Ikhwaanul Muslimiinka ee uu kasoo jeedo Madaxweynaha la sheegay in xukunka laga tuuray ee Mohamed Mursi.
Inta badan Wariya yaasha shaqada iskaga tegay ayaa kasoo jeeda Dalka Masar iyagoo mucaarad ku ah Ururka Ikhwaanul Muslimiinka, sidaas darteed ayey Al-Jazeera iskaga hayaameen maadaan TV-gu uu waayihii danbe aad u buun buuninayay dhaqdhaqaaqa walaalaha Muslimiinta ah ee dalka Masar ka talinayay.
Sidoo kale warbixin Qoraaleed kasoo baxay Telefishinka Al-Jazeera ayaa lagu cadeeyay in wariya yaashani ay iskaga hayaameen TV-ga arimo la Xiriira aragtida Siyaasada ee TV-gu ku shaqeeyo.
Ilaa iyo iminka ma cadda halka ay raad dhigan doonto Al-Jazeera oo ah Telefishinka Carabta ugu awooda badan uguna codka dheer, iyadoo xitaa lagu tiriyo kuwa caalamka ugu saameynta badan ee dunida Muslimiinta aad u kicin kara muddo kooban.